बिजुलीको करेन्ट लाग्यो भने के गर्ने यसबाट कसरी बच्ने ? जानी राखौँ - Aajako Nepali Khabar
Home चाखलाग्दो कुरा बिजुलीको करेन्ट लाग्यो भने के गर्ने यसबाट कसरी बच्ने ? जानी राखौँ
बिजुलीको करेन्ट लाग्यो भने के गर्ने यसबाट कसरी बच्ने ? जानी राखौँ
ताजा खबर :- केवल पानी परिरहेको दिन मात्र नभई बल्कि भित्तामा सिलन भएको घरमा खुल्ला वा डेमेज्ड वायरिंग भएकोले करेन्टको खतरा बढ्छ । यदि करेन्ट लागेपछि हार्टबीट रोकियो भने पीडितलाई कार्डियोपल्मोनरी रिसिसटेशन टेक्निक प्रयोग गरेर १० मिनेटमा होशमा ल्याउन सकिन्छ । यसमा पीडितको छातिमा प्रति मिनेट १०० पटक दवाव दिनुपर्नेहुन्छ र मुखबाट श्वास दिनु पर्दछ ।
आज हामी तपाईलाई करेन्ट लाग्यो भने प्रयोगमा आउने यस्तै केहि बचावटको टिप्स दिन गईरहेको छौ । यदि कोहि व्यक्तिलाई करेन्ट लागेको छ भने सबै भन्दा पहिले घरको सबै ईलेक्ट्रोनिक उपकरणहरुलाई बन्द गरेर त्यस व्यक्तिलाई करेन्ट लागेको चीज बाट टाढा राख्नु पर्दछ र त्यस व्यक्तिलाई सिधा सुताउनु पर्छ ।
करेन्ट लागेको व्यक्तिलाई मुखबाट श्वास दिनु पर्दछ र त्यस व्यक्तिको छातिमा १ फुट को दुरी बाट हाथले दबाव बनाइराख्नु पर्दछ ताकि धडकन चलिरहोस् ।
जुन पनि व्यक्तिलाई करेन्ट लागेको छ त्यस व्यक्तिलाई नाङगो हाथले समात्ने गल्ती नगर्नु । पीडित व्यक्तिको श्वास चेक गरिरहनु र केहि गडबडि हुन साथ एंबुलेन्स बोलाउनु पर्दछ ।
प्लगको सबै जाँइंटसमा सेलो टेपको प्रयोग नगरि ईलेक्ट्रोनिक टेपको प्रयोग गर्नुपर्दछ गीजरको पानी प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले गीजर बन्द गर्नुपर्दछ । अर्थिगं को चेक हरेक ६÷६ महिनामा गराइराख्नु ।
जुन ईलेक्ट्रोनिसको आइटम्स को तार खिया लागेको छ वा टुटेको छ त्यस्तो तारलाई प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले रिपेयर गराउनु पर्दछ । कुनै पनि तारको इलेक्ट्रोनिक्स प्रोब्लमस भयो भने आफै केहि पनि नगर्नु , प्रोफेशनलको सहयोग लिनु पर्छ ।
घरको सबै सोेकेटस कवर हुनुपर्दछ । कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक अप्लायन्सेस पानीको नजिक नराख्नु । जहाँ करेन्ट प्रवाह भइरहेको छ त्यँहा दाउराको सहायताले अनप्लग गरिदिनु पर्छ ।
बाथरुमको कुनै पनि इलेक्ट्रोनिकस अप्लायन्सेस को उपयोग न को बराबर गर्नु । यदि बाथरुमको भित्ता सिलन छ भने त्यहा को स्विच बोर्ड मा करेन्ट लाग्न सक्ने भएकोले पहिले नै सावधान हुनु पर्छ ।